Ahoana ny fomba hahatonga ny mpitety tranonkala amin'ny Kindle handeha haingana kokoa (ary maninona no tsy atao izany) | Ireo mpamaky rehetra
Ahoana ny fomba hahatonga ny tranokalan'ny Kindle handeha haingana kokoa (ary maninona no tsy atao izany)
Joaquin Garcia | | Amazon Kindle, Fampianarana mandrehitra
Tokony holazaintsika ihany koa izany izao tutorial tsy miasa afa-tsy amin'ny mpamaky Kindle. Ary raha miasa amin'ny maodely bebe kokoa izy dia hiaraka amin'ny eReaders fa tsy amin'ny takelaka velively. Raha manandrana manao izany amin'ny Fire or Kindle Fire ianao, satria maodely efa taloha, dia mety hampidi-doza ny vokany.
3 Ahoana ny fomba hampandehanana haingana kokoa ny browser ereader?
4 3 Solon'ity fika ity mba tsara ihany
5 Hevitra manokana
Ahoana ny fomba hampandehanana haingana kokoa ny browser ereader?
3 Solon'ity fika ity mba tsara ihany
Soa ihany misy safidy hafa hafa amin'ity fika ity hahafahantsika mamaky ireo pejin-tranonkalantsika amin'ny fomba haingana sy azo antoka kokoa izany ary tsy very fahazoana miasa.
Ny voalohany amin'ireo safidy hafa dia mampiasa serivisy famakiana taty aoriana, angamba izany no safidy tsara indrindra satria ankoatry ny fanatsarana ny vakiteny amin'ny Kindle, azontsika ampiharina amin'ny mpamaky boky hafa, manova ny vakiteny eo anelanelan'ny fitaovana, na mamerina azy ireo amin'ny fotoana rehetra satria namaky azy io tamin'ny voalohany isika nefa tsy manahy raha nesorina na novaina.
Ho an'ireo mpampiasa Kindle dia azontsika atao ny misafidy SendtoKindle ary ho an'ireo mpampiasa fitaovana hafa dia manana safidy izahay Pocket. Samy tsara dia tsara ary tsy vitan'ny avelao izahay hamaky ireo pejin-tranonkala ao amin'ny mpamaky anay toy ny ebook izy ireo fa azontsika atao koa ny mampiasa ny rakibolana, manoritra na manova ny lokony.
Ny safidy fahatelo dia ny tranainy indrindra nefa mitovy asa ihany. Ny fampidinana ny vaovao na ny fahana avy amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny fakan-tahaka toa ary alefaso ho ebook ho an'ny mpamaky anay. Ity asan'ny Caliber ity dia tena antitra nefa miasa tsara ary ny mahasamihafa ny teo aloha ihany dia izany mamela antsika hanana fifehezana lehibe ny famakiana, betsaka noho ny tamin'ny fomba teo aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » Ahoana ny fomba hahatonga ny tranokalan'ny Kindle handeha haingana kokoa (ary maninona no tsy atao izany)
KloudNote, mpamaky iray izay miaraka amin'ny lamaody kahie nomerika
Ny serivisy eubico Nubico dia novidian'ny orinasa soedoà Nextory